Indlu encinci yaseOakfield Coachouse - I-Airbnb
Indlu encinci yaseOakfield Coachouse
Indlu yomqeqeshi eguquliweyo inika ithuba lokuhlala kule ndlu itofotofo ngokumangalisayo ngaphakathi kweendawo zokuhlala ekhaya.
Wamkelekile kwiNdlu yoQeqeshi, eyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka ekwilali yasePlumley kufutshane neKnutsford.
Indlu yoQeqesho iguqulwe yaba yindawo yokuhlala ebanzi neyamkelekileyo ebekwe kumhlaba wekhaya lomkhosi. Le ndlu inomnyango wayo wabucala, indawo yokupaka ekhuselekileyo yemoto enye, ipatio/indawo yokuhlala kunye nokujonga emaphandleni aseCheshire.
Kukho eyona ndlu kawonke-wonke yeGolden Pheasant ekwi-0.4miles enika ukhetho olubanzi lokutya neziselo ukusuka emini emaqanda; IPlumleys Garden Centre Café ivula ukususela ngo-9.30am inika isidlo sakusasa esikhulu okanye sasemini kumgama wokuhamba iimayile eziyi-0.6. I-Knutsford ikumgama oziikhilomitha ezi-2 ebonelela ngothotho lweebha, iivenkile kunye neeresityu ezikwafumaneka ngololiwe osuka kwisikhululo sikaPlumley ohamba phakathi kweChester neManchester (uhambo lwemizuzu engama-45) nokuma phakathi kwezinye iAltrincham, Hale kunye neMobberley.
Isikhululo seenqwelomoya saseManchester sikumgama oziikhilomitha ezili-9.
Le ndlwana ibonelela ngemicrowave, iFridge, iKetile kunye neToaster kunye neTea kunye neKofu. Kukwakho ipakethi eyamkelekileyo yesonka, ibhotolo kunye nobisi.
Nceda uqaphele ukuba akukho Wifi kwipropathi.
Sikwame kufutshane kakhulu ne-Oak Tree ye-Peover indawo yomtshato. (1/2 yemayile)
I cottage ine TV kunye ne King size bed. Iduvet, imiqamelo, ilinen yokulala neetawuli zeendwendwe zikhona.
Ilungele ukubaleka kwezothando, uhambo lweshishini, iindwendwe zomtshato okanye indawo yokuhlala kwisikhululo seenqwelomoya.
Izinto ezinomtsalane zalapha ekhaya ziquka ipaki yaseTatton, iziko ledolophu yaseKnutsford, iintaka ezitya inyama yeGauntlet, iholo yaseArley kunye neegadi kunye nebhanki yaseJodrell.
Indawo yaseGreenbelt yaseKnutsford, ePlumley ibonelela ngendlu kawonke-wonke ebonelela ngokutya ukusukela emini emaqanda, iziko legadi yasekhaya enendawo yokutyela egqwesileyo, isikhululo, uhambo lokuphumla kunye nokukhwela ibhayisekile, iimayile ezi-1 ukuya eLower Peover apho iiBells zePeover pub kunye nendawo yokutyela, iSt. Icawe yase-Oswalds kunye nendlu kawonke wonke ye-Crown ikhona (inika imenyu elungileyo). I-Knutsford ngokwayo ikumgama weemayile ezimbalwa apho unokukhetha uninzi lwezinto ezithandayo zokupheka.
Hi I’m Phil, we have been living around the area for over 10 years and we love all the diverse options available for days or nights out.
Our aim is to make sure all our guests are able to relax and enjoy a break from their usual routine in lovely comfortable surroundings. We want everyone to wish to return to our Coach House again at some point in the future. Please ask if you have any requests.
Our aim is to make sure all our…
Nceda uqhagamshelane Phil nazo naziphi na izicelo, imibuzo njl ngefowuni, umbhalo okanye i-imeyile